Daraasada Jajabaadka: Faa'iidooyinka Loo Adeegsado Khabiirada Bixinta Dijital ah waxay siiyaan Ganacsigaaga Ganacsiga ee Ganacsiga
Wakaalad suuq geyn oo wanaagsan waa inay awoodaan inay ka caawiyaan ganacsigaada eCommerce si ay u koraansi deg deg ah adoo yareynaya walbahaarka walwal leh ee aad qabto. Waa wax dabiici ah in dhammaan ganacsatada ganacsigu rabaan inay koraan shirkadahooda, wax badan abuuraaniibinta iyo in ay gaaraan jagooyinka hogaaminta ee qaar ka mid ah suuq-geynta suuqa.
Sida muuqata, waxaad u baahan tahay gacan-qabasho mararka qaarkood. Shaqaalaynta suuq-geynta suuqahay'addu waa inay noqotaa meel wanaagsan oo lagu bilaabi karo - rã¤umung zã¼rich. Jason Adler, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare wuxuu sharxayaa 8 faa'iidooyinka aad heli doonto haddii aad kireysato khabiiro dhijitaal ah.
Wakaaladda suuqgeynta caadiga ah waxay ku habboon tahay abuuritaanka, iibsashada iyo raadintagaadiidka meesha loo baahan yahay. Maxay fiican yihiin? Waa hagaag, sababtoo ah afartan arrimood:
Waayo-aragnimo. Haysashada khibrad ballaadhan oo la shaqeynaysa shirkado kala duwan,hay'adda suuq-geynta ayaa laga yaabaa inay aragtay daraasado guulo badan oo ololayaal ah.
Ururka. Waxaad ka heli doontaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan inta lagaa qaatay mashruuca
Waqtiga firfircoonaanta. Naftaada badbaadi wakhti qiimo leh adoo siinaya iyagasuuq-geynta suuq-geynta ganacsiga inta aad kala soocaysid wax kasta oo kale.
Dhaqaale. Tan iyo markii ay iibin lahaayeen waxyaabo badan oo xayeysiis ah ka horhawlahaaga, waxay (hay'adaha) ay heli karaan heerar ka wanaagsan.
Sida magacu soo jeediyo, suuq-geynta miisaanku wuxuu ka turjumayaa hirgelinta sawirro, fiidiyoowiyo qodobbada dabadeedna u qaybiyaan iyaga oo ujeedadoodu tahay soo jiidashada, ka qaybqaadashada iyo u rogista suuqyada macaamiisha. Dunida maanta ahQodobbada xayeysiinta waxaa loo isticmaalaa ujeedada loo isticmaalo iibsadaha dukaamada, suuq-galinta content waxay abuureysaa qiime. Waa doorka suuqgeyntahay'ad si aad u abuurto wax cusub, xiiso leh oo soo jiidasho leh.
Suuq geynta Emailka
Farsamadan suuq-galku marna si buuxda uma adeegsan ganacsiyadaAdeegyada suuq-geynta suuq-geynta suuq-geyntaada waxaa laguu balanqaadi karaa natiijooyin wanaagsan. Just abuur liis ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo iyo adigahay'addu waxay kuu maareyn doontaa adiga.
Waa wax caadi u ah ganacsiyada in ay maamusho bogaga warbaahinta bulshada - bogga Facebook, aKanaalka YouTube, Google+ ama Twitter. Boggani waxay si joogto ah u cusbooneysiineysaa madax-xanuun, taas oo suurtogal ah in lagu guuleystocaawinta wakaaladda suuq geynta.
Naqshadeynta iyo horumarinta shabakadda
Ganacsatada ganacsiyada ganacsigu waxay u adeegsadaan sababo badan. Qaarkood waxay sidaas sameeyaan sababtoo ahwaxay samayn karaan, iyo kuwa kalena waxay u sameeyaan sabab kasta oo sharaf leh. Nasiib darro, maaha qof walbaa xirfad u leh inuu abuuro boggiisa internetkaaragti fiican ee joogitaanka online (qaabeynta webka). Haddii aad tahay qof cusub, markaa hay'adku waa inay kaa caawiyaan.
Sawir-qaadidda iyo sawir qaadashadu waa muhiim marka ay timaado iibinta waxyaabaha interneetka.Ka feker dhacdo taas oo aan macmiilku haysanin faahfaahin ku saabsan sida badeecadu u egyahay - sawir ama fiidiyo markaa waa inay soo galaan.Tan waxaa si fiican u qaban doona hay'ad suuq geyn ah.
Isbedelka sicirada celinta (CRO)
Waxaa jira boqolaal hay'adood oo suuq geynaya kuwaas oo bixinaya CRO. Tani (CRO)waxay ku tiirsan tahay imtixaanka iyo sidoo kale xog uruurinta si loogu badalo nuxurka webka ee loo beddelay raadad. CRO waa farsamo dabiici ah, sidaa daraadeedwaxay ubaahantahay khibrad xirfad leh in la qabto.
Marka ganacsigu sii kordho, waxaad ku xiran tahay inaad la kulantid caqabado badan. WixiiTusaale ahaan, sida aad u soo saartid iibsiyo badan, waxaad heleysaa mas'uuliyado macaamiisha oo badan. Iyada oo leh khadad ballaadhan oo badeeco ah, waxaad heleysaa liis dheeraad ahsii wad. Tirada badan ku tuur fursadaha xayeysiinta ,Update SEO, qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada iyo waxaad heli doontaa sawirka ballaaran.